Yintoni uMncedisi weGoogle kwaye Ungayisebenzisa njani?
Android Izikhokelo & Izifundo
Isikhokelo kumncedisi womntu oncokolayo weGoogle
Umncedisi weGoogle ungumncedisi we-digital digital ongayiqonda izwi lakho aze aphendule imiyalelo okanye imibuzo.
Umncedisi welizwi ujoyina i- Apple ye-Siri , i- Amazon ye-Alexa , kunye ne- Microsoft yeCortana yehlabathi yabancedisi bezedijithali abahlakaniphile abakhona entendeni yesandla sakho. Bonke aba bancedisi baya kuphendula imibuzo kunye nemilayezo yezwi kodwa elowo unalo ukunambitheka kwalo.
Nangona i-Google Assistant ekwabelana ngamanye amanqaku kunye nabancedisi abakhankanywe ngasentla, inguqu yeGoogle incokola kakhulu, oko kuthetha ukuba unokubuza imibuzo yokulandelelana ukuba ufuna olunye ulwazi malunga nombuzo othize okanye ukukhangela.
Umncedisi weGoogle wakhiwe kumgca we- Google Pixel weedivaysi , ispredishithi yokusasaza ye-Android TV , kunye neKhaya leGoogle , indawo yekhaya ye-smart home. Ukuba awuqhelanga neKhaya leGoogle, cinga nge-Amazon Echo kunye ne-Alexa. Umncedisi weGoogle naye unokufikelela kwi-chat bot kwi-Google Allo.
Nantsi konke okufuneka ukwazi nge-Google Assistant.
Izixhobo zoNcedisi zeGoogle Zinikezela ngeMpawu eziPhezulu
Ukuqalisa uMncedisi weGoogle, unokude ucofe iqhosha lakho lasekhaya okanye uthi "Ulungile Google." Njengoko sichazile, unokwenene ncokola nayo, mhlawumbi nge-chat okanye ngezwi.
Ngokomzekelo, ukuba ucela ukubona iindawo zokutyela ezikufuphi, unokuluhluza uluhlu olokubona ii-Italiya zokutyela okanye ucele iiyure zokutyela ezithile. Unokubuza kakhulu nantoni na oya kuyifuna injini yokukhangela, kuquka ulwazi olunjengeenkalo zengingqi, iimozulu zendawo, amaxesha e-movie kunye neehedyuli zoqeqesho. Ngokomzekelo, unokucela inkunzi yeVermont, uze ufumane izikhokelo ukuya kwisixeko saseMontpelier okanye ufumane abantu balo.
Unokucela ukuba uMncedisi enze izinto kuwe njengokubeka isikhumbuzi, ukuthumela umyalezo okanye ukufumana izikhombisi-ndlela. Ukuba usebenzisa i-Google Home, ungayicela nokuba udlale umculo okanye uvule izibane. Umncedisi weGoogle unokukwazi ukwenza ukugcinwa kokuhlwa kokutya usebenzisa i-app efana ne-OpenTable.
Izilungiselelo zobhaliso Okunikezelayo ngeSuku zonke okanye kwiSonto
Njengawuphi na oncedisayo-oncedisayo wobomi, kulungile xa bebenokusebenza. Unako ukusetha ukubhaliswa kolwazi oluthile, olufana nemozulu yansuku zonke kunye nokuhlaziywa kweendlela, izaziso zeendaba, amanqaku ezemidlalo kunye nezinto ezifana. Mane uthayiphe okanye uthi "ndibonise imozulu" uze ukhethe "thumela imihla ngemihla" ukuba ubhalise.
Ngaliphi na ixesha, unokubhenela ukubhaliselwa kwakho ngokuthi, akumangalisi, "bonise ukubhalisa kwam" kwaye baza kubonisa njengoluhlu lwamakhadi; thepha ikhadi ukuze ufumane ulwazi oluninzi okanye ukhansele. Unokuxelela uMncedisi ixesha othanda ukuyifumana ngalo, ukuze ufumane ulwazi lwemozulu ngaphambi kokuba ushiye umsebenzi okanye isikolo kunye nezilumkiso zeendaba ngelixa usela ikhofi yakho yasekuseni okanye udla isidlo sasemini, umzekelo.
Njengemveliso eminingi yakwa-Google, uMncedisi uya kufunda kwiindlela oziphathe ngayo kwaye uya kulungelelanisa iimpendulo zayo ngokusekelwe kwimisebenzi edlulileyo. Ezi zibizwa ngokuba zizimpendulo ezihlakaniphile. Umzekelo, unokuzama ukuqikelela ukuphendula kwisicatshulwa kwiqabane lakho ukubuza into oyifunayo isidlo okanye ukuba ufuna ukubona i-movie ngokubonisa ukukhangela okufanelekileyo okanye iimpendulo ezinamathanga ezifana "Andizi."
Nangona unombuzo ovuthayo xa ungekho kwi-intanethi, usenokuthetha noMncedisi weGoogle. Iya kulondoloza umbuzo wakho kwaye iphendule ngokukhawuleza xa ubuyela kwimpucuko okanye ufumane i-Wi-Fi hotspot. Ukuba usendleleni kwaye ubone into ongenakukwazi ukuyichonga, ungathatha umfanekiso wayo kwaye ubuze uMncedisi ukuba yintoni okanye yintoni eyenziwe ngokusebenzisa uphendlo lwemifanekiso. Umncedisi angafunda kwakhona iikhowudi ze-QR.
Indlela Yokufumana Umncedisi weGoogle
Unokuya kwi-Google Play ukufumana insiza ye-Google Assistant kwaye uyikhuphele kwi-Android 7.0 yakho (Nougat) okanye idivayisi ephezulu. Lona linyathelo elilula kubantu abaninzi.
Ukuba uzimisele ukuthabatha amanyathelo ambalwa, kubandakanywa ukuthungatha idivayisi yakho , unokukwazi ukufumana uMncedisi weGoogle kwizinto ezincinci ze-Android zokudala kunye / okanye ezingekho zePixel, kuquka ne-Google nexus kunye ne-Moto G, kunye OnePlus One kunye ne-Samsung Galaxy S5.
Ukuqala, kufuneka uhlaziye idivayisi yakho kwi-Android 7.0 uNugat, unayo inguqu yakutsha ye-Google app kwaye ukhuphe i-BuildProp Editor (ngu-JRummy Apps Inc.) kunye ne-KingoRoot (ngo-FingerPower Digital Technology Ltd.).
Isinyathelo sokuqala kukucothula i-smartphone yakho, leyo yindlela enokuyihlaziya ngayo inkqubo yakho yokusebenza ngaphandle kokulinda umphathi wakho ukuba aqhube. Uhlelo lokusebenza lwe-KingoRoot luya kunceda kule nkqubo, kodwa ayifumaneki kwi-Google Play Store, ngoko uya kufuneka ungene kwizicwangciso zakho zokhuseleko uze uvumele ukukhuphela iifayili kwimithombo engaziwayo kuqala. Insiza iya kuhamba ngeyona nkqubo. Jonga isikhokelo sethu sokuqamba idivayisi yakho ye-Android ukuba uqhuba kuyo nayiphi na imiba.
Emva koko, uya kusebenzisa i-BuildProp Editor ukuze ukhohlise i-Android ngokucinga ukuba ifowuni yakho ingumfowuni we-Google Pixel. I-BuildProp ifumaneka kwi-Google Play Store. Emva kokuba wenze iinguqu ezimbalwa, kufuneka ukwazi ukukhuphela i-Google Assistant; mazixwayiswe ukuba ezinye zezinhlelo zakho zokusebenza zingasebenzi kakuhle emva kokukwenza njalo, nangona usebenzisa i-Google Nexus ifowuni, kufuneka ilungile.
I-Techradar inesiqulatho esineenkcukacha ngokunyanisekileyo xa unquma ukuhamba kule ndlela. Ukuqulunqa idivayisi yakho kunye nokuguqula ngale ndlela kuhlale kubandakanya umngcipheko , ngoko qiniseka ukuba uyagcina ifowuni yakho ngaphambi kokuba uqhubeke kwaye uhlale unyathelo lokukhusela ukukhupha i-app engonakalisayo .
Indlela yokuxhuma kwi-VPN kwi-Android
Indlela yokuSebenzisa ukuBoniswa kweNombolo kwi-Nokia 8
Indlela yokuthatha i-Tutorial ye-Screenshot kwi-LG G Flex
Ngaba i-Android yakho ifuna i-Task Killer App?
Indlela yokuvula i-Samsung Phone yeFree
Indlela yokususa i-Akhawunti ye-Gmail kwiCandelo lakho le-Android
Indlela yokukhusela abantwana bakho kwi-Android kwaye Yenza i-Kid Friend
Shintsha ii-SIM Cards kwi-Galaxy S6 yakho okanye kwi-S6 Edge
I-Complete Guide ku-Android Auto
Iimpawu eziMnandi zeMicrosoft, Fitness, kunye neziHlomelo zeZidlo kunye neempapasho
Indlela yokwenza u-SpamAssassin uMarga Ugaxekile kwiSihloko
Yintoni iFayile yeDLL?
Indlela yokutshintsha ubungakanani bokuprinta kwi-Photo Digital
Iimoto eziSiseko zeCereo ze-Car Stereo
Ukuxoxa ngeNkonzo ye-XMS yokuThunyelwa kweMilayezo (e-eBuddy yangaphambili)
Indlela yokusebenza kunye ne-10.1.1.1 Idilesi ye-IP
Fit In The Hole Reimagines XHUMA I-Phone yakho
I-Garmin's Forerunner 225 Bukela Ngomlinganiselo Wentliziyo
Indlela yokutshintsha isisombululo sakho sesiKhenketho seNetbook
Indlela yokuvula kwaye ungene kwi-AIM kwi-AIM Mail
9 I-Raspberry Pi 3 Iimeko ezinokuthi uzilahle
Indlela yokulungisa i-Error 404
I-Apps Best zeTweens
Yenza ngokwezifiso I-Desktop Inkcazo ye-Desktop-Icandelo 2
UMzalwan 'HL-L6200DW Umshicileli weLaser Business Laser
Ukuqhawula nje uMdaniso we-2016 (XONE)
Iingcebiso ze-iPhoto kunye neTricks - Izifundo kunye nezikhokelo
Indlela yokunquma phantsi kwi-Mobile Data Use
Indlela yokugcina iPad yakho ephakamileyo
Uqinisekile Kangakanani Ukuba Ukhuselekile Kwi-intanethi?
Iikhompyutha zevidiyo ze-X-COM